Ihe otiti: Spgbasa na Madagascar - na Seychelles?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ihe otiti: Spgbasa na Madagascar - na Seychelles?
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Madagascar • News • ndị mmadụ • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị ọrụ ahụike na Seychelles egosila na mmadụ 1 anwalela nke ọma maka ọrịa Pneumonic, ọ nọpụrụ iche ugbu a ma na-agwọ ya ọgwụ nje.
Otu onye nkuzi basketball basketball Seychellois nwụrụ n'ọrịa a na njedebe ọnwa gara aga n'ụlọ ọgwụ dị na Antananarivo, isi obodo Madagascar, ka akwụkwọ akụkọ Today na Seychelles si kwuo, ebe mmadụ 42 nwụrụ site na "Ọnwụ Ojii."
Onye nchịkwa ahụ, Alix Allisop, na-enyere ndị nwoke Seychelles aka na-achị achị nke Beau Vallon Heat na Madagascar n'oge Indian Ocean Club Championship. Gọọmentị Madagascar na ngwụsị izu ahụ gosipụtara na ọnwụ Allisop bụ n'ihi ọrịa oyi na-efe. Ndị otu ndị otu basketball basketball Seychellois, bụ ndị nọ na Allisop na-akpachi anya, anọwo na-ele anya kemgbe ha laghachiri mba ahụ, Gedeon kwuru. Ha nọ ugbu a na agụmakwụkwọ ndị agha na Perseverance, agwaetiti a gbahapụrụ ewepụ nke dị na mpụga Victoria.
Dị ka Healthtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) si bụrụ ọrịa pneumonic, ma ọ bụ ihe otiti nke metụtara ngụgụ, bụ ụdị kachasị njọ ma nwee ike ịkpalite ọrịa na-efe efe site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na ụmụ irighiri mmiri na ikuku, yana ọnya akpịrị site na ụmụ anụmanụ na-arịa ọrịa. The incubub oge nwere ike ịbụ mkpirikpi ka 24 awa.
Dabere na Seychelles News Agency, na Seychelles 'Ministry of Health na Wednesday gwara ndị ọrụ ụgbọelu niile na ndị ọrụ njem ka ha kụda ndị mmadụ ịga Madagascar n'ihi ọrịa ahụ. Emebekwala usoro ahụike ndị ọzọ na ọdụ ụgbọ elu nke Seychelles.
Jude Gedeon, kọmishọna na-ahụ maka ahụike ọha na eze Seychelles, kwuru na ndị isi arụnyela ebe a ga-esi na-agagharị na nyocha igwe na ọdụ ụgbọ elu mba iji chọpụta ikpe. A na-enyekwa ụdị maka ndị njem gbadatara iji kwuo ma ọ bụrụ na ha nwere mgbaàmà ọ bụla yiri nke ihe otiti ahụ wetara.
Na mgbakwunye, ụlọ akwụkwọ abụọ egosila na ha na-emechi izu ndị ọzọ, n'ihi enweghị ndị nkuzi n'ime ụlọ ọrụ ndị a, ebe ọ bụ na enyerela ha ụbọchị isii ma tinye ha na nlegharị anya n'ụlọ n'ihi enyo enyo na ha ikpe a kwadoro. Ọ bụ ezie na ha enweghị mgbaàmà ọ bụla, a na-enyekwa onye ọ bụla na -elezi anya ịkpachapụ anya.
Na Madagascar, amachibidoro nnọkọ ọha na eze ugbu a na isi obodo, ebe ọ dịkarịa ala mmadụ 114 butere ọrịa ebe ọ bụ na achọpụtara ọrịa ahụ na ngwụsị August.
Ihe otiti a na-echekarị dị ka ihe site na akụkọ mgbe ochie, mana ọ ka na-eto eto na Madagascar, bụ ebe ọrịa a na-echegbu oge. Obodo a na-enwe ihe nwere ike ịbụ mbibi ya kachasị njọ n'ime afọ yana ihe ruru ndị 200 ndị a na-enyo enyo na ha adaa ọrịa site na August, ka Minista Ahụike Madagascar si kwuo.
Ihe ka ọtụtụ n'ime afọ a bụ ọrịa oyi baa, nke a na-ebute site na ụkwara, ma gbuo onye butere ọrịa na-erughị otu ụbọchị. Iji mee ka ntiwapụ ahụ kwụsị, Madagascar na-emechi ụlọ ọrụ ọha na eze nwa oge. Ndị ọchịchị gọọmentị nyere iwu ka mahadum abụọ mechie, ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ emechikwala ụzọ ha niile na mba ahụ, gụnyere isi obodo, Antananarivo, ka enwere ike ịgba ọgwụ ụlọ.
A na-ejikarị ọgwụ nje agwọ ọrịa bubo, andtù Ahụ Ike Worldwa ebulakwa ihe karịrị otu nde ọgwụ nje ná mba ahụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na edozighị ya, nje bacteria ahụ nwere ike gbasaa site n'ọbara rue ngụgụ ma bute ọrịa pneumonic, nke nwere mgbaàmà yiri oyi nkịtị.
Na-enweghị ọgwụ nje, nje ahụ nwere ike gbasaa n'akụkụ ndị ọzọ, na-aghọ pneumonic, ebe ndị butere ya ga-amalite iku ume, obi mgbu, na mgbe ụfọdụ mucous ọbara ma ọ bụ mmiri. Ọ bụrụ na a gwọghị ya, ọrịa ahụ nwere ike ito ngwa ngwa ruo ọnwụ.
A na-ahụkarị ihe otiti ahụ na Sub-Saharan Africa na Madagascar - mpaghara nke nwere ihe karịrị pasent 95 nke akụkọ a na-akọ, dị ka CDC si kwuo. Madagascar na-ahụkarị ọnụọgụ ọnụọgụ kacha elu n'ụwa niile, yana ihe dịka ọrịa 600 kwa afọ.